SomaliTalk.com » 2010 » April » 19
Home » Archive Maalinta April 19th, 2010
Qoraal ku saabsan wax qabadka Wasaaradda Dastuurka iyo Arrimaha federaalka oo ay u gudbisey gudiga dastuurka….
Warbixin uu ku saxiixan yahay Wasiirka Dastuurka DFKMG, Madoobe Nuunow oo ku saabsan wax qabadka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka oo loo gudbisey gudiga dastuurka iyo arrimaha federaalka baarlamaanka 16/04/2010 oo nuqul kamid ah soo gaarey aan henay hoos ka akhri… Maxamed Macallin Cismaan (All-man) Somalitalk Jabuuti. fatxumaalik@hotmail.com Qoraalka wasiirka Wasaaradda Dastuurka...
Halkudheg: Baarlamaan, xildhibaan
Walad Cabdalla: Warqad ku socota Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee u nool Dalka Dibaddisa. (war. Number 24)
United Nations Political Office for Somalia (UNPOS) Xafiiska Qaramada Midoobay u Qaabilsan Arrimmaha Siyaasada Soomaaliya (UNPOS) Nairobi, 19 April 2010 Asalamu calykumIgagudoma Salan diran 1. Intabadan xiliga guga oo aan filayo in uu ka dhacaayo inta badan dalaka aaddegan-tihiin, ayaa la imaanaaya inta badan rejo ku saabsan mustaqbalka. Waxaan rajeynayaa in warbixinteydan joogtada ah ee aan siinayo...
Waxyeelooyin kala duwan oo ay ciidamada Gumeysigu u gaysteen dad rayid ah
Ciidamada qalabkasida ee Xoreynta Ogadenya oo cagta mariyey qaar kamid ah saldhigyada ciidamada gumaysiga Itoobiya. — Masuuliyiin ka socotay gumaysatada itoobiya iyo dabaqoodhi hor ordayay oo loo diiday inay shir ku qabsadaan hotel ku yaala magaalada Mineapolis. — Qorshayaal cusub oo gumaysigu doonayo inuu ku cunaqabateeyo shacabka si ay gaajo ugu le,daan. –Dil iyo dhaawac loogu...